Ukuya kuthi ga kwi-1078 km unokuhamba ngentlawulo enye kunye neTesla Model X | Iindaba zeGajethi
Okwangoku kwi-panorama yezithuthi zombane, i-Tesla yeyona nkampani ibalaseleyo, hayi ngenxa nje yeminyaka ibikho kule marike, kodwa nangenxa yokuphuculwa okuthe chu okufezekisayo kwizithuthi zayo ukuze ukuzimela kube ingxaki kukhuphiswano, hayi bona.
Ukuzimela saso nasiphi na isithuthi kuxhomekeke ubukhulu becala kuhlobo lokuqhuba esikwenzayo, nokuba ngumbane, ipetroli okanye idizili. Umnini weTesla Model S ukwazile ukufumana uluhlu ngentlawulo enye yeekhilomitha ezili-1078, elawula indlela yokuqhuba ngawo onke amaxesha.
Imodeli ekhethekileyo yi-P100D, imodeli yokuzimela kwayo okusemthethweni kungaphezulu nje kwesiqingatha somnini wase-Itali wale moto. Ingxelo yangaphambili ebekelwe isithuthi sombane ifunyanwa kwiikhilomitha ezingama-901. Ukufezekisa ukuzimela, iTesla Autopilot inenxalenye enkulu yesityholo, ukongeza ekusetyenzisweni kweevili ezizodwa ezinenqanaba elincinci lokuqengqeleka kwi-asphalt, okwenza ukusetyenziswa kwayo kube nokusebenza ngakumbi. Ukufezekisa ukuzimela, umsebenzisi uthathe iiyure ezingama-29, ngesantya esiphakathi kweekhilomitha ezingama-40 kwaye isixhobo somoya besingadibananga.
Olu hlobo lweendaba lusibonisa ukuba sinokubandisa njani ngokubonakalayo ubomi bebhetri bezithuthi zombane. Gcina ukhumbula ukuba amanani asinikwayo nguTesla asebenzisa ukuqhuba okuqhelekileyo, ngokukhawulezisa, ukuqhaqha, ukugqitha nge-100 km ngeyure, kunye nomoya ...
I-Tesla yabo bonke abaphulaphuli ibonisiwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye inexabiso lokuqala le- $ 35.000 enoluhlu olungaphezulu kwe-300 km, uluhlu esinokulufikelela kwi-500 km, ukuba sithenga ibhetri eyongezelelweyo enexabiso le- $ 9000, isongezelelo esinokuhlawula abasebenzisi abaninzi boluhlobo lwesithuthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukuya kuthi ga kwi-1078 km kunokuhamba ngentlawulo enye kunye neTesla Model X
UDespacito seleyona vidiyo idlalwe kakhulu kuYouTube